July 2019 - MM Live News
Uncategorized / By MM Live News
11.7.2019တဦး​မေတ္တာနဲ့တဦး​စေတနာပါပဲသိန်း(၁၅၀၀၀)ကံထူးရှင် အဖွားဒေါ်ခင်တင့်မှ ရွှေထီး ထီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဦးစောဝင်းအား ကားတစီးလွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်​ အဖွားက ဒေါ်ခင်တင့်၊ အသက်(၈၀)ပါ။ သားသမီး (၅)ယောက်ရှိပြီး တစ်ယောက်ဆုံးသွားပြီ ဖြစ်လို့ လက်ရှိ သားသမီး(၄)ယောက်ရှိတယ် ပြောပါတယ်။ “ မျက်စိရှေ့မှာ ငွေတွေ အပုံလိုက်ရောက်နေတာ “ အိပ်မက် မက်လို့ ထီထိုးခဲ့တာပါတဲ့.. ဂဏန်းကိုတော့ မရွေးချယ်ခဲ့ဘဲ ထီရောင်းတဲ့သူပေးတဲ့ ထီလက်မှတ်ကိုပဲ ယူခဲ့ပြီး ပေါက်ခဲ့တာကတော့ အဖွားရဲ့ကံပါပဲကွယ်။ အဖွားအလှူလုပ်မယ် ပျော်တာပေါ့နော်တဲ့ ။ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးက အဖွားထီပေါက်တယ်ဆိုတာသိရကတည်းက ထီလက်မှတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး လုံခြုံရေး အတွက် ရန်ကုန်ကိုလိုက်ပို့ခဲ့တာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ unicode version 11.7.2019တဦး​မတ်ေတာနဲ့တဦး​စတေနာပါပဲသိနျး(၁၅၀၀၀)ကံထူးရှငျ အဖှားဒျေါခငျတငျ့မှ ရှထေီး ထီအရောငျးကိုယျစားလှယျဦးစောဝငျးအား ကားတစီးလှဲပွောငျး ပေးအပျခဲ့ပါတယျ​ အဖှားက ဒျေါခငျတငျ့၊ အသကျ(၈၀)ပါ။ သားသမီး (၅)ယောကျရှိပွီး …
အကြွေးနဲ့ထီရောင်းပေးတဲ့ထီသည်ကြီးရဲ့ အိမ်ပြန်ခရီးကို ပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ အဘွားဒေါ်ခင်တင့်ရဲ့ စေတနာ လေးစားစရာပါ…. Read More »
လမ်းသွားရင်း က​လေးငယ်​တဦးကို ဖျတ်​ခနဲ ​တွေ့ လိုက်​လို့​ – စိတ်​ထဲမသကာင်္တာနဲ့ ကား​ပေါ်က ဆင်းပြီး က​လေးရဲ့ ​အ​ခြေအ​နေကို ကြည့်​လိုက်သောအခါ
သတင်းစုံ / By MM Live
လမ်းသွားရင်း က​လေးငယ်​တဦးကိုဖျတ်​ခနဲ ​တွေ့ လိုက်​မိတယ်​ – စိတ်​ထဲမသကာင်္လို့ ကား​ပေါ်က ဆင်းပြီး က​လေးရဲ့ ​အ​ခြေအ​နေကို ကြည့်​တဲ့အခါ က​လေးက​မော​နေတယ်​ ….. အသက်​ကို မနည်းရှူ​နေရတယ်​….​ကျောနဲ့ ရင်​ကို စမ်းကြည့်​တဲ့အခါ ချွဲသံ​တွေက ​ဟော​ဟောထလို့ ….. မင်း က​လေးကို ​ဆေးခန်းမပြဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါ ငို တယ်​ …. ယောက်ျားက​အချုပ်​ကျ​နေတယ်​….ဒီ​နေ့ ရုံးထုတ်​….. က​လေးမိခင်​​ ​နေတာက ဘူတာရုံ တဝိုက်​ အလုပ်​က ​တောင်းရမ်းအလှူခံ….. ​အေး ….အဲ့ဒါ​ကြောင့်​ ​တွေ့ ဖူးတယ်​လို့ ထင်​​နေတာ….. လမ်း​ပေါ်မှာ အဲ့လို က​လေးနဲ့ ​တောင်း​နေရင်​ လိုက်​ဖမ်း​နေတာ အစ်​ကို ပါပဲ…. မင်း​တို့ ​နေတဲ့တဝိုက်​ မကြာခဏက​လေး​တွေကို လိုက်​ရှာလိုက်​ဖမ်း​နေတာလဲအစ်​ကို ပဲ …. ခု …
လမ်းသွားရင်း က​လေးငယ်​တဦးကို ဖျတ်​ခနဲ ​တွေ့ လိုက်​လို့​ – စိတ်​ထဲမသကာင်္တာနဲ့ ကား​ပေါ်က ဆင်းပြီး က​လေးရဲ့ ​အ​ခြေအ​နေကို ကြည့်​လိုက်သောအခါ Read More »
နေပြည်တော်Wisdom Hill မူကြိုကျောင်း သက်ငယ်မုဒိန်းမှုရဲ့ အဓိကသက်သေ ဆရာမနှင်းနု ပျောက်ဆုံးနေဟုသိရ……
Wisdom hill ကလေးမူကြိုကျောင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုရဲ့ အဓိက မျက်မြင်သက်သေဟု ယူဆဏသော ဆရာမလေး နှင်းနု ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ tomorrow သတင်းဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဆိုပါ နှင်းနုဆိုတဲ့ ဆရာမနဲ့ ဂျူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့က ဘီဘီစီ သတင်းဌာနနဲ့ တိုက်ရိုက် အင်တာဗျူးထုတ်လွှင့်အပြီးမှာ ပျောက်ဆုံးသွားတာလို့ ဆိုပါတယ်။ ၆ ရက်နေ့မှာ တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူး ရတယ်ဆိုတာ သိရတာနဲ့ ကျနော်တို့ သတင်းမီဒီယာတွေ အင်တာဗျူးဖို့ သွားရောက် စောင်းဆိုင်းခဲ့ကြတာပါ။ နေ့လည် ၁၂နာရီကနေ ညနေ ၃နာရီအထိ wisdom hill ကျောင်းရဲ့ ဝင်ပေါက်ကနေ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တွေ့ခွင့်မရသလို အရိပ်အယောင်မျှ မတွေ့ခဲ့တာကြောင့် ဆရာမ နှင်းနုအိမ်ကို ၇ ရက်နေ့မှာ သွားရောက် ကြပါတယ်။အိမ်မှာလည်း …
နေပြည်တော်Wisdom Hill မူကြိုကျောင်း သက်ငယ်မုဒိန်းမှုရဲ့ အဓိကသက်သေ ဆရာမနှင်းနု ပျောက်ဆုံးနေဟုသိရ…… Read More »
ယုတ်မာသူတွေအတွက် တကယ့်တိုက်ပွဲမှာ ကျည်ကုန်ပစ်ဖို့ စုထားတယ်ဆိုတဲ့ ဆရာသက္ကမိုးညို Zawgyi ယုတ်မာသူတွေအတွက် တကယ့်တိုက်ပွဲမှာ ကျည်ကုန်ပစ်ဖို့ စုထားတယ်ဆိုတဲ့ ဆရာသက္ကမိုးညို ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲသည် အောင်ကြီးကို ဆွဲထုတ်လာတယ်။ အင်မတန် အားနည်းတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ ပြတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာသည် ရဲတပ်ဖွဲ့အပေါ်မှာ တင်နေတဲ့ ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးကို တရားရုံးပေါ်မှာ တင်ပေးလိုက်တာပဲ။ နောက်ပြီးတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်သည် အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့သွားတယ်။ သံသယ ဖြစ်ဖို့ ကောင်းတယ်။ ကလေးမိဘ တွေကတော့ ဖြန့်တာ မဖြစ်နိုင်။ ကျောင်း ကျောင်းမှာ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျကြောင့် ကျောင်းသည် နှင်းနုနဲ့ ဆရာမတွေကို ထုတ်သုံးလာတယ်။ (ဘီဘီစီ အင်တာဗျူးတွေ) သူတို့ ထွက်မယ့် အချက်တွေသည် ဗစ်တိုးရီးယားလေးသည် သူတို့နဲ့ …
ယုတ်မာသူတွေအတွက် တကယ့်တိုက်ပွဲမှာ ကျည်ကုန်ပစ်ဖို့ စုထားတယ်ဆိုတဲ့ ဆရာသက္ကမိုးညို Read More »
၈၉ နှစ် အရွယ်အဖွားအိုကို (၇၁) နှစ်အရွယ် အဘိုးမှ မုဒိန်းကျင့် သက်ကြီး မုဒိန်မှု တရားခံ နံရိုးနဲ့ လက်ကျိုးအောင် ရိုက်နှက်ခံရ
၈၉ နှစ် အရွယ်အဖွားအိုကို (၇၁) နှစ်အရွယ် အဘိုးမှ မုဒိန်းကျင့် သက်ကြီး မုဒိန်မှု တရားခံ နံရိုးနဲ့ လက်ကျိုးအောင် ရိုက်နှက်ခံရ Wednesday, July 3, 2019 ထိုင်းတောင်ပိုင်း သရမ်ခရိုင်မှာ ၈၉ နှစ် အရွယ်အဖွားအိုကို အိမ်သားတွေ မရှိကြတဲ့အချိန် ရိုက်နှက် မုဒိန်းကျင့်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ တရားခံ Yap Chaiphak ရစ်ချိုင်းပတ် အသက် (၇၁)ဟာ အိမ်နီးချင်းတွေဖြစ်ပြီး သမီးဖြစ်သူအပြင် သွားနေတဲ့အချိန် အိမ်ရှေ့မှာ လဲအိပ်နေတဲ့ အဖွားရဲ့ဗိုက်ကိုထိုးကြိတ်ပြီး မုဒိန်းကျင့် ခဲ့ပါတယ်။ သမီးပြန်လာတဲ့အခါ အဖွားဟာ အော်ဟစ်ငိုနေပြီး ငရစ်ငါ့ကို လက်သီးနဲ့ ထိုးပြီး မုဒိန်းကျင့်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်၊ မီးက တရားခံ …
၈၉ နှစ် အရွယ်အဖွားအိုကို (၇၁) နှစ်အရွယ် အဘိုးမှ မုဒိန်းကျင့် သက်ကြီး မုဒိန်မှု တရားခံ နံရိုးနဲ့ လက်ကျိုးအောင် ရိုက်နှက်ခံရ Read More »